कोरोनाले मृत्यु भएको युवक भनेर भाइरल ‘फेक फोटो’को कथा - फिचर - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ७, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — जेठ ३ गते कोरोना भाइरसले नेपालमा पहिलोपटक एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको पुष्टि भयो । त्यो खबर तीव्र रुपले फैलियो । सामाजिक सञ्जालहरुमा ती महिलाको फोटो धमाधम सेयर हुन थाल्यो । यसरी तस्बिर सार्वजनिक गर्नेको आलोचना पनि निकै भयो ।
त्यसको भोलिपल्ट बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमा रहेका एक २५ वर्षीय युवकको पनि कोरोनाले मृत्यु भएपछि देशैभर चिन्ता बढ्यो । गाउँपालिकाको मटैया–५ स्थित दिपेन्द्र प्राविको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका युवकको तस्बिर पनि महिलाकै जसरी एकैछिनमा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुन थाल्यो ।
तस्बिरमा युवाको नाकमा सेतो कपास घुसाइएको देखिन्छ । तस्बिर सेयर गर्दै हार्दिक श्रदाञ्जली लेख्नेहरुलाई भ्याई–नभ्याई थियो ।
अचानक जेठ ५ गते सामाजिक सञ्जालमा एक युवकको पोस्टले त्यो तस्बिर सेयर गर्नेहरुलाई झस्कायो । ‘कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने २५ वर्षीय युवक म होइन । मलाई कसैले फसाएको हो । सुतिरहेको मान्छेको फोटो खिचेर ग्रुपमा हालेछ । मलाई थाहा छैन’ आइतवीर लिम्बूको फेसबुकबाट यो पोस्ट अन्जली अधिकारी ˆयान क्लबमा सार्वजनिक हुनासाथ सबैको ध्यान तानिएको हो ।
कान्तिपुरसँग भिडियो कलमार्फत् सम्पर्कमा आएका आइतवीर लिम्बूले आफ्नो तस्बिर यसरी प्रयोग भएको देख्ना सुरुमा झट्का लागेको बताए । ‘हिजो फेसबुक खोलेर हेर्दै थिएँ । अचानक फेसबुकमा मेरो फोटो आयो । मेरो फोटो यहाँ कसरी आयो भनेर हेर्दा, कोरोनाले मरेको २५ वर्षीय केटा यही हो भनेको लेखेको थियो । त्यसपछि म त छक्क परें । कसले त्यसो गर्‍यो मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘पछि मैले म यो मान्छे होइन । म मरेको छैन भनेर फेसबुकमा अपलोड गरें । त्यतिबेलासम्म धेरै ग्रुपहरुमा मेरो फोटो सेयर भइसकेको थियो ।’
२२ वर्षका आइतवीर काठमाडौं कोटेश्वरमा बस्छन् । तीन महिनाअघि मात्रै ताप्लेजुङबाट विदेश जान काठमाडौं आएका थिए । उनी काठमाडौं आएको केही दिनमै कोरोनाको महामारी फैलिन थाल्यो । त्यसपछि काठमाडौंमा रहेका तीनजना साथीसँग बस्दै आएका छन् ।
यस घटनाबारे गाउँमा भएका आमाबुवा, दाई र भाइसम्म बेखबर छन् । ‘गाउँमा त नेट पनि छैन । फेसबुक नै चल्दैन । परिवारले यसबारे थाहा पाउनु भएन,’ उनले सुनाए ।
आफ्नो तस्बिर दुरुपयोग कसले गर्‍यो त ? आइतवीरको अनुमानमा कसैको अनुहार आउँदैन । आफूसँगै बस्दै आएका साथीहरुले यस्तो नगरेको तर्क गर्छन् उनी । उनी भन्छन्, ‘मेरै साथीहरुले त किन यस्तो गर्थे र । कोही अरु नै हुनुपर्छ ।’
कानूनी उपचारमा जानेबारे सोध्दा उनको जवाफ थियो, ‘के गर्नु अब गर्नेले गरिसके । अब के गर्ने र ! म यहाँ नयाँ पनि छु ।’
प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ १२:४३
भारतीय क्वारेन्टाइनका नेपाली भन्छन्, ‘योभन्दा त बरु जेल ठिक होला’
जेष्ठ ७, २०७७ कमल पन्थी
बर्दिया — भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीले राम्ररी खान–बस्नसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । मापदण्डअनुसारको सुविधा माग्दा दुर्व्यवहार खेप्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘चार दिन भयो, नपाकेको खाना दिन्छन् । नास्ता पनि काँचो पुरी–तरकारी खान बाध्य छौं, शुद्ध पिउने पानी छैन, शौचालय गन्हाएर जान सकिने अवस्था छैन,’ गुलरिया–७ का लवकुश यादवले फोनमा सुनाए ।
चार दिनअघि गुलरिया नगरपालिका–७ का यादवसहित चार जना भारत, हैदराबादमा मजदुरी गरी बहराइच हुँदै नेपाल फर्कन लाग्दा भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरी क्वारेन्टाइनमा राख्यो । गुजरातबाट फर्केका ६० जनालाई पनि त्यहीँ पठाइयो । क्वारेन्टाइनमा राखेको पहिलो दिन एउटा बिस्कुट र पानीका भरमा रात काट्नुपरेको गुलरिया–११ का नन्कु खानले दुखेसो पोखे ।
बर्दियासँग सीमा जोडिएको बहराइचको तिलक इन्टर कलेज मटेरा स्टेसनको क्वारेन्टाइनमा झन्डै अढाई सय नेपाली छन् । मटेरा स्टेसनआसपासका चार विद्यालयमा राखिएका क्वारेन्टाइनका समेत जोड्दा १ हजार २ सयभन्दा बढी नेपाली छन् ।
दैलेखका दीपक साउदले एउटै कोठामा धेरै जना सुत्नुपर्दा केही बिरामी परिसकेको बताए । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सुविधा माग गर्दा भारतीय प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्छन्,’ उनले भने, ‘झुल नहुँदा मलेरिया र डेंगुको जोखिम बढेको छ । सुत्ने ओछ्यान र तन्नासमेत फोहोर छ ।’
दैलेखको नारायण नपा–६ की विद्या दाहालले आफूहरूलाई जंगलको बीचमा रहेको कलेजमा राखिएको बताइन् । ‘गर्मीले बस्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘दिनभर विद्युत लाइन काटिन्छ । राति पनि मुस्किलले आउँछ । सास्ती भोग्न बाध्य छौं ।’ कोठामा भिड भएको भन्दै कतिपय बाहिर चौरमा सुत्ने गरेको उनले सुनाइन् ।
तिलक कलेजको क्वारेन्टाइनमा १५ बालबालिका पनि छन् । ‘जेल बरु ठीक होला, यहाँको क्वारेन्टाइन मानवताविरोधी जस्तै छ,’ दैलेखका लालमणि रेग्मीले गुनासो पोखे । आफूहरूलाई तत्काल उद्धार गरेर नेपालकै क्वारेन्टाइनमा राख्न उनले माग गरे ।
‘कुकुरको खाना बरु राम्रो होला, हाम्रो बत्तर छ,’ गुलरिया–७ का अशोक यादव भने । उनीहरूका अनुसार खाने–बस्ने व्यवस्था राम्रो हुनुपर्ने माग राख्दा प्रहरीले लट्ठीले हिर्काउने गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीसँग स्वाबको रिपोर्ट माग्दा ‘तिम्रै सरकारलाई दिन्छौं’ भन्ने गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी खासै जाँच गर्न आउँदैनन् पनि ।
क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीले आफूहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्न माग राखी मंगलबार दिनभर प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ १२:२३